Latest Media Shirqoolkii lagu Di... [01-02-2017 11:02] Taarikhda musharax ... [01-02-2017 10:48] Banaan baxa maanta ... [13-11-2016 16:44] Yaabka qabsaday Ask... [12-11-2016 19:45] Hooyooyin Soomaali ... [11-11-2016 10:28] Dhaqamo diimeedka k... [10-11-2016 13:40] Nin Soomaali oo 1 M... [08-11-2016 22:43] Waa Kuma C/raxmaan ... [07-11-2016 19:45] Tikniko aad u fara ... [07-11-2016 16:06] Dalka Dunida ugu Mu... [05-11-2016 23:28] Facebook iyo Shirkado kale oo waa weyn oo Dacwad ka gudbiyay Madaxweyne Trump - iftineducation.com
iftineducation.com – Shirkadaha ugu waa weyn dhinaca teknooligiyadda Mareykanka sida Apple, Facebook iyo Google ayaa maxkamadda geeyay dacwad ka dhan ah xayiraadda socdaalka ee Madaxweyne Trump. Waxay ku doodayaan in xayiraadaasi ay dhaawac adag gaarsiisay ganacsiga Mareykanka.
Wuxuu sheegay in maxkamaduhu ay shaqada ka dhigayaan “mid adag” ayna iyagu eeda dusha u ridan doonaan haddii uu dhib dhaco.
Aqalka cad iyo labo gobol oo ka horyimid go’anka ayaa kama dambays loo qabtay malinti Isniinta ah si ay usoo gudbiyaan doodahooda.
Madaxweyne Trump ayaa si weyn u cambaareyay xaakimka James Roper tee oo is hortaagay go’ankiisa, waxa uuna sheegay in uu rumeysan la’yahay in xaakim uu dalka gelin karo xaalad qatar ah waxa uuna ku celceliyay in haddi ammaan darro dhacdo uu isagu masuuliyadda qaadi doono, sharcigana la soo taagi doono.
Daawo Sawirada: Baarlamaanka Isra’il oo meel mariyay Sharci muran badan abuuray